Qabsoon Isaa Boojihamuu Ummanni Hayyamuu Hin Qabu -
Onkololeessa 14, 2017
Qabsoon bilisummaa ummata Oromiyaa baroota hedduuf munyuuqqachaa baatullee arra bakka if duuba hin deebinee fii sadarkaa abdachiisaarra geeysee jirti. Irreeysii torbaan lama dura Hora Arsadeetti gaggeeyfame haala kan firaa fii diinaa fiis ifa godhee jira. Ayyaanni ummanni miliyoona shanii olitti shalagaman irratti arkaman milkiin xumuramuun, qabsaawotaa fii sab-boonota bira dabree warra diinaaf meeshaa tahaa jiranillee, gammaachuu fii naasuun onnee raase. Wayyaanee, tan ummatoota biyyaa maraaf tuuta jaartee, maqaa Feedraalaa tiin kormaa irratti tattee, qabeenya biyyaa xuuxaa jirtu, haala kanarraa waan itti dhagayame tilmaamuun nama hin dhibu.
Fincilli Sadaasa 12, bara 2015, Gincitti jalqabe waggaa lamaaf itti fufee yoona gayuun waan mataa Wayyaanee keessa hin turini. Gatiinsa Irreessa bara dabrerratti gooteen kan itti aanu ni kolaafamaan fedhii isii ti ture. Haala kanaaf, kumaatama mana hidhaatti guurtee “አይደገምም” yaroo jattuuniis hawwiin isii fiixa ni bahaa abdattee ti. Hawwii kanaas akka fiixa baasaniif basaasotaa fii dabballoonni leenjifachaa baate, horiin irratti dhangalafte, himanaa oli.
Karoora olii tiin fedhiin isii fiixa bahuu hanqannaan shira lammii waliin fixuu fii shorokeessuutti bobbaate. Bobbaa kanaaf, Aaw-wadaayii fii Hargeeysatti lubbuu Soomaalootaa galaafattee, Oromotatti quba laattee, shiftoota akka isii tiin ilmaan Oromoo kanneen lafa ummata Soomaalee keessa jiran xiqqaa fii guddaa gatutti seente. San isii hanqatee, kumaatama qe’ee alagaa tii fii lafuma abbaa isaanii (Jijjiga)-rraa buqaafte. Yaroo kana gootu, ummanni Oromoo tiis Soomaalota irratti haala fakkaataa ni fudhataa murteeyfattee ti. Garuu, lammiin, Wayyaaneen kana hunda godhuun, qabsoo bilisummaa isaanii irraa ija libsachiisuu fii bulchiinsa umrii isii dheereeyfachuuf tahuu waan hubataniif, Soomaalota isaan keessa jiran, ifirraa odoo hin taane, isiirraa eegutti seenan.
Haala Wayyaanee kan gochoota shiroota armaa olii tii fii kanneen biraa tiin sukukkulooyte keessatti Irreessi qophaawe, irree ummata Oromiyaa, tokkummaa isaanii, fii hunda caalaa, murannoo qabsoo bilisummaa tiif qaban yoomiyyuu daran hangaase. Hanga’iinsi kuniis, ummata bira dabree, meeshaalee isiin ummata Oromiyaa tiin ugguruu fii bulchuuf tolfatte, OBN fii OPDO keessaan dhawwaaquu jalqabe. Kuni waan tasa godhamee odoo hin taane waan itti karoorfame. Qophii Irreessaaf godhamaa ture hanqisuuf, gufachiisuu fii booreeysuu Wayyaaneen ijibbaata hin godhin hin qabdu. Lakkuma hawwiin fincila ummataa dhaabuu fii qophii Irreessaa hanqisuu dhabuu dhugaa itti tahaa dhufeen, karoora biraa baafachuu dirqamte. Karoorri kuniis, anaannata ummataa meeshaalee isii keessaan lallabsuu jalqabuu dha. Mala kanaa fiis ORTO (Oromia Radio and Television Organization) ykns TV-Oromiyaatti kan beekkame, kan ummanni “TV-Boqqolloo” baasaniifiif maqaa haaraya OBN (Oromiya Bloggers Network) moggaasuu fii hoogganoota OPDO, garii, warra lammiif anaannatan gootee as baasuun, qabsoo ummataa boojihuuf tattaafachuu dha.
Meeshaan lameen olitti ibsaman, warra Wayyaaneen dantaa isii tiiyfachuuf, baroota dheeraa dura tolfatte. Baroota dila aangorra jirtu kanaas, yaroo feete ummatatti “jaas” jachaanii, yaroo biraa ammoo irraa qabaa as geeyse. Arraas, haluma san itti fufuun, hoogganoota OPDO warra OBN-iin dabaaltee, dinqarratti baaftee, dhibdee ummataa akka dhageeyfatan godhaa jirti. Jarri OPDO kanneen haala kanaaf leenjifamaa bahan, warri dantaa ummataa fiixa baasurra TV-rratti bahanii mul’achuun itti fardii, akka waan biyya alaa tii dhufaniitti, miidhaa baroota 26–af Wayyaanee waliin ummata mudan jiran dhageeyfachaa, bakka barbaachisetti gadadoo isaanii bowwaasaa jiru.
Wayyaaneen gama tokkoon san godhaa, karaa kaaniin, Abdii Illee bira dabratee warra akka isaa kanneen ummatoota Oromiyaa waliin daangaa qaban irratti muudde, bitaa fii mirgaan, Kaabaa fii Kibbaan, hidhachiisaa, ummaata Oromiyaa gachisiisuu fii daangotarraa buqqaasuuf shftoota irratti gurmeeysaa jirti. Warri OPDO kan kana hunda beekan, ijaan arkan, gurraan dhagayn, hujiin fardeeyfatanii jiran waanuma itti ajajaman tan ummata hujii dhoorkanii walgayiif yaamanii rakkoo isaanii himachiisuu fii anaannatoo if fakkeeysu. Wanni godhaa jiran kuni, gadadoo ummataatti qoosuu dha. Haalli isaanii akka haala adurree miidhama hantuutaa tiif mararfattuu ti. Ummanni Oromiyaa warra ilmaan irraa ajjeesaa taaziyaa waliin taa’anii fii dinqarratti bahanii gadadoo isaa irraa dhageeyfatan takkaa hin dhabne. Kanneen miidhama isaa dhawwaqanii fiis itti qaalawanii hin beekan. Kan dhabe, warra sirna gabrummaa Wayyaanee jalaa isa baasu qofa.
Duuba, arra, kaa’iimman isaa, qeeyroon, diina hidhannoo caanceeyfate, kan waan naasuun taate hin beeyne dura harka qullaa dhaabbatanii injifannoo injifannoorratti galmeeysaa jiru. Haala kana keessatti, ummanni akka duritti sobamuun irra hin jiru. Gara laafina isaa irra aanee, shoora deemaa jiru sirritti xiinxaluu qaba. Qabsoon hadhooytuun gaggeeysaa jiruu bilisummaa isaa gonfachuu biraan geeysee jirti. Kanaa tu Wayyaanee waan qabattuu fii dhiiftu wallaalchisee, OPDO sab-boonaa fakkeeysuu dirqe. Haalli kuni as qofatti kan dhaabbatuu miti. Lakkuma hudhaan itti jabaatuun Wayyaaneen maloota hedduun as bahuun isii waan hin oole. Maloota kana keeysa tokko warroota baroota hedduuf ifaa fii dhooysatti “Maalo nu galchaa!” jachaa, kadhachaa jiranii fii Faranjootatti dirmachuu iyyachuu dha. Ayyaan-laalltoonni haala kanaaf biyyoota alaa keessatti wal haqaaranii, libaanata “yoomuma qunnamamnaa?” arfachaa jiran heddu.
Haallan armaa oli gufuulee xumura qabsoo bilisummaa dura tarrifamuuf jiraatan keessaa jibiri. Ummanni kana hubachuun, akka ammaan duraatti, hiree isaa namoota ykn garoota harka kaayuun dogoggora lamadaa keessa seenuu irraa if eeguun barbaachisaa dha. Tumsa abbaa fedherraa dhuftuuf fudhachaa, qabsoo isaa boojihama irraa tiiyfachaa, murtii hiree isaa murteeyfachuu, hamma maayyiitti, itti fufuu qaba.
Previous “Dide!” jedhe Oromoon.
Next #OromoProtests in Ethiopia take an unexpected turn